Way Khaldanyihiin ... Kuma Fiirsanaysid Qoraal | Martech Zone
Dhowr sano ka hor, waxaan dadka kula talin lahaa inay wax badan qoraan. Xaqiiqdii, waxay ahayd sabab muhiim ah sababta ay dadku kaaga raaceen adiga Twitter. Si dhakhso leh dhowr sano iyo Twitter ayaa ka soo dhaqaaqay dhowr jeer saacad saacad illaa qaylo dhago leh oo ah autoposts, koonto been abuur ah, spamers, iyo macluumaadka xawaare aan si fudud lagu dheefsan karin heer kasta oo raaxo leh.
Xaqiiqdu waxay tahay, haddii aad isku dayeyso inaad fiiro gaar ah u yeelato qol dheer, waa inaad codkaaga kor u qaaddo ama aad naftaada ku celceliso. Twitter waa qol weyn… si waalli ah u qaylinaya.
Waan sii wadaa aqrinta xeerarka marka loo eego Twitter-ka khadka tooska ah. Xeerarka ayaa sii wadaya in laga daabaco waxyaabaha ku saabsan waqtiga ugu wanaagsan ee Tweet iyo Aad u tiro badan. Waxaan go'aansaday inaan tijaabiyo kuwan xeerarka. Xaqiiqdii, kaliya ma aanan sameynin tijaabo yar, waxaan qarxiyay Twitter.
Ha I Khaldamin
Miyaan jecelahay inaan ku qayliyo qol dheer? Maya Miyaan jecelahay inaan naftayda ku celiyo? Maya absolutely gabi ahaanba waan necbahay. Waana hubaa in dadka qaarkiis ii sheegi doonaan in talooyinka aan bixin doono ay dhibaatada ku soo kordhin doonaan oo aysan ka caawin doonin xallinteeda.
Dhibaatadu maaha dadka aniga oo kale ah. Dhibaatadu waa qolka. Maalin kasta sanado badan, waxaan si firfircoon uga qayb qaatay Twitterverse waxaanan isku dayay inaan bixiyo qiime, madadaalo, caawimaad iyo wadahadal. Waqti ka dib, inkasta, waan ku daalay Twitter. Waxaan furayaa quudintayda oo boqolkiiba inyar oo wada hadalka ah ayaa qiimo leh.
Ku dhowaad maalin kasta waxaan xannibi spammer. Markaan fiiriyo bogooda, waxay leeyihiin hal farriin oo soo noqnoqotay boqolaal jeer. Dhab ahaan, intee in le'eg ayey ku adagtahay Twitter inay shaandhayn ku sameyso akoonnada si loo hubiyo inaysan ku soo celin farriintooda marar badan iyo in ka badan?!
Marka, illaa ay Twitter go'aansato inay wax ka qabato tayada iyo tirada macluumaadka lagu wadaago Twitter, waxaan go'aansaday inaan jabiyo xeerarka asxaabteyda baraha bulshada. Oh… wayna shaqeysay
Tijaabinta Saacad Walba, 24 Saacadood Maalintii
Jenn wuxuu i baray plugin weyn oo WordPress ah oo la yiraahdo Dib ugu noqo boostada Old. In kasta oo ay jirto nooc bilaash ah, waxaan si weyn ugu talin lahaa in la bixiyo astaamaha dheeraadka ah ee lagu soo daray nooca cajiibka ah ee Pro Noocani wuxuu leeyahay astaamo badan oo tan ah wuxuuna xoojiyaa awooda lagu riixo waxyaabahaaga leh muuqaal muuqaal ah si toos ah uga socota WordPress. Plugin ayaa sidoo kale u ogolaanaya Bit.ly isdhexgalka si aad uga cabiri karto sicirka gujint-ka xiriiriyeyaasha la wadaago.
Waa kuwan tusaalaha sida Card Card-ka uu u muuqdo
Fiiri Boggeena Cusub… iyo Kheyraadkeena Cusub http://t.co/UWExub2Dy7 #content # wordpress pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
- Teknolojiyada Suuqgeynta (@martech_zone) June 24, 2015
Waxaan dhigay aaladda si aan ugu dhejiyo waxyaabo aan kala sooc lahayn sanadkii ugu dambeeyay saacad kasta Twitter-ka. Intii aan dhajin jiray 2 illaa 4 cusbooneysiin maalintii, haddana waxaan daabacay 24 illaa 30 jeer maalintii. Qayladaas badan, waxaad u maleyneysaa inaan lumin doono dhammaan kuwa raacsan oo aan ku wadi doono ka qayb qaadashadayda taangiga. Nope.
Natiijada Tweeting Aad u Badan
Tirakoobyadu been ma sheegaan oo Falanqeynteyda Twitter-ka iyo sidoo kale barta Google Analytics ayaa ii sheegaya in tani ay ahayd tallaabo la yaab leh! Halkan waa jab:
Heerka Hawlgalka Laga soo bilaabo 0.5% ilaa in ka badan 2.1%!
Tweet Muuqaal UP 159.5% ilaa 322,000.
Booqashooyinka Xogta UP 45.6% ilaa 2,080.
Followers XIDHIIDHKA 216 ilaa 42,600.
Macmacaanka UP 105.0% ilaa 900.
Tweets Adiga Ku Xiriira UP 34.3% ilaa 6,352.
Gaadiidka Goobta ee Twitter UP 238.7% ilaa 1,952 booqasho.
Ma hubo sida aan ula murmi karo tirakoobyadan. Ma lumin kuwa raacsan, waxaan kasbaday kuwa raacsan. Ma lumin kaqeybgalka, waa labanlaabmay. Ma lumin booqashooyinka goobta, way laban laabmeen. Halbeeg walba wuxuu tilmaamayaa xaqiiqda ah, anigoo si weyn u kordhinaya tirada tweets la daabacay, waxaan si weyn u horumariyay waxqabadkeyga Twitter.
Sababta Waxay umuuqataa inay iska cadahay, kaliya maahan inaanan dhibaynin kuwa raacsan hada, qoraaladayda 'tweets' waa la arkaa wax badan, dib ayaan ufiiriyay, waxbadanna waan gujiyay Haddii aan isbarbardhigi lahaa, waxay noqon laheyd inaad wadada ku dhex mareyso taraafikada mashquulka badan tweetkuna waa boorar. Fursadaha taraafikada lagu arko boorarkaaga ayaa aad u yar. laakiin haddii aad dhigi karto boodhadh kasta kiiloo mayl ama wax lamid ah, fursadaha in lagu arko ayaa aad uga fiican.
Ha I Dhageysan!
Ha isku halleyn tusaalahayga inaad ku buuqdo buuqaaga barta Twitter. Xusuusnow inaan kaliya la wadaagayo Kaararka Twitter-ka oo leh waxyaabo qiimo badan leh. Sidoo kale kama baqi doono inaan la wadaago isla saxda Tweet wax ka badan hal jeer maalintii. Fursadaha ayaa ah in kuwa raacsan aysan arki doonin wax ka badan hal jeer. Isku day inaad labalaabto heerka daabacaadda ee Twitter oo arag sida ay u saameyneyso adiga Analytics. Haddii ay shaqeyso, iskuday markale La socodsii sida ay u socoto faallooyinka.
Daah-: My Dib ugu noqo boostada Old xiriiriye waa isku xirnaansho xiriir. Aad ayaan uga helay taas oo isla markiiba aan iska diiwaan galiyay iskaashi aan iyaga la yeesho.
Tags: boostadasoo nooleeyo qoraal horesoo nooleeyo qoraal hore projadwalka wordpress bulshadais dhexgalka ereyada bulshadaTwitterwordpress bulshada
Guusha Warbaahinta Bulsheed ee Shirkadeed Waxay U Baahan Tahay Qalabka SMM
Jul 5, 2015 markay tahay 11:45 PM
Twitter iyo Facebook ayaa badalay qaabkii dadku ula xiriiri jireen waqtiyada casriga ah….